Ethiopia: Haleellaan rookkeettiin Rakkoo Fide! | Kichuu
Ethiopia: Haleellaan rookkeettiin Rakkoo Fide!
Posted on November 23, 2020 by kichuu_admin
Sadaasa 23/2020 #Rookkeettiin Rakkoo_Fide!
Haleellaan rookkeettii magaalota Naannoo amaaraa Bahardaar fi Gondar taasimaa tureef jiru irratti garee mootummaa keessatti wal-shakkii guddaa Uumaa jiraachuutu beekame. Aangawoonni fi qondaalonni waraana Amaaraa koloneel Abiyyi Ahimad fi garee isaa shakkuutti jiru. Akka odeessa keessoo argannetti maddi rakkoo kanaa waan 2 irraa madda.
1ffaa,rookkeettii balleessine jedhamee odeeffannoo dogoggoraa maaf himuun barbaachise?
2ffaa, qondaalonni kun rookkeettii dhiyeenya kana”garee Finfinneetu ummata Amaaraa kakasuuf nuun rukuchiisaa jira” jedhanii shakku. Kunis humni Amaaraa garmalee miidhamee Walqaayit fi Raayyaa keessa darbee Tigraay loluu didaa waan jiruufi jedhu.
Yaadadhaa, qondaalonni dhimma rookkeettii kana irratti dubbatan hundi kanneen aangoo barbaacha gara Oromoo himatanii dha.
#Breaking NEWS Miidhaa_rookkeettii
Haleellaa rookkeettii Bahardaar ganama har’aatiin miidhaa ulfataan qaqqabuu isaa odeeffannee jirra. Akka maddeen keenya university Bahardaar irraa miirkaneeffannetti haleellaa kanaan:
1. Kaampii milishaa yeroo gabaabaa keessatti orientation waraanaa fudhachaa jiru,
2. Gamoo qondaalota waraanaa fi kaabinee Mootummaa Naannichaa keessa jiraatan,
3. Hospitaala yeroo loltoonni fi qondaalonni 700 ol waraana irratti miidhaman keessatti yaalamaa jirantu haleelame. Dhimma kanarratti gama lamaanuu irraayyuu hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru.
Beeksisa:Kaabinee fi qondaalonni waraanaa naannoo Amaaraa nageenya saffisa hojiif jedhamee erga waggaa 2 as bakka Makood jedhamutti kophaatti kaampii jiraatu.FSM irraa
Of eeggannoo jabeessaa!
Lolli naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti jalqabee jiru humna addaa Naannoo Amaaraa fi humna raayyaa ittisa biyyaa ol jechuun oromoo walloo lolatti geessuuf mariirra jiru. Marii kanarrattis yeroo loltanii deebitan lafa mana jireenyaa fi qarshii 60,000tu isinii kennama jechuun waadaa sobaa galuunifin gowwomsaanii uummata oromoo walloo fixuuf gara lolaatti oofaa jiru. Yaa miidiyaa oromoo kanarratti hojjechuu qabdu.Mo’iiboon Baqqalaa irraa
Karoorri Maqalee yeroo 3ffaaf fashale!
Mootummaan Nafxanyaa waraana fi qondaalota mootummaa Tigraayif ammas guyyaa 3 keessatti harka kennadhaa jedhe,Ibsa galgala kaleessaa baaseen.kana jechuun karoorri Nafxanyaan Maqalee gahuu yeroo 3ffaaf fashalaa’uu isaa agarsiisa.
Kanas dhaggeeffadhu!Isaayyaafi koloneel Abiyiif barana dhumeefi jira.oromoo WBO kee jabeessi!
#ቴሌቪዥን_ትግራይ፡ተገፍቶ ወደ ትግራይ የገባውን የወራሪዎቹ ቅጥረኛ ወታደር ከፍተኛ ኪሰራ እየደረሰበት መሆኑ ተገለፀ፡፡
Kaabinee Aanaa Galaanaa Yohannis Taaddasa Kan har’a waraana gabroomfattuu waliin WBO sakatta’uu godina Gujii Lixaa deeme qacam jedhe kanadha.
Gurmuu Haleellaa Dirree Oromiyaa
Dhaggeeffadhu!wayyaaneen humna diinaa akka barbadeessite miidiyaa Irratti ibsa kennaa jirtii.
BREAKING NEWS: Haleelamuun waraana Isaayyaas Dubbii Fide!
Waraanni mootummaa kallattii afuriin magaalaa Wukroo meeshaa gurguddaan haleeluu itti fufe.